Kudzivirira kwezvirwere zvinotapukira
na admin pa 20-03-25
Anodzivirira maski ndechimwe chezvinyorwa zvinobudirira zvekudzivirira kudzivirira chirwere chepamuviri, icho chine basa rakakosha mukudzivirira nekudzivirira. Izvo zvakakosha zvikuru kusangana nemhando dzehunhu hwevanofema kuitira kuti uone hutano uye kuchengeteka kwevanhu. Kana paine ...
Nekuenderera mberi kwekuvandudza kwemamiriro ezvinhu echirwere, kudyiwa kwemaski kwakawedzera zvakanyanya. Chero imwe maski inogadzirwa inowedzera kuchengetedza kuchengetedza kwevanhu uye vashandi vekurapa. Iwo madhipatimendi anokwanisa uye emabhizimusi ekugadzira anoenderana anomhanya nenguva. Maererano ne ...